चिकित्सा शिक्षा विधेयक : जोगायो प्रसाईंको मेडिकल कलेज | गृहपृष्ठ
Home शिक्षा चिकित्सा शिक्षा विधेयक : जोगायो प्रसाईंको मेडिकल कलेज
on: २६ पुष २०७५, बिहीबार १२:१९ शिक्षा, समाचार
चिकित्सा शिक्षा विधेयक : जोगायो प्रसाईंको मेडिकल कलेज
काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा चिकित्सा समितिले बुधवार पारित गरेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ले दुर्गा प्रसाईंद्वारा सञ्चालित झापाको बीएन्डसी अस्पताल जोगाउने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा एउटा विश्वविद्यालय अन्तर्गत दिइने सम्बन्धनको विषयलाई घुमाउरो गरी बीएन्डसीलाई असर नपर्ने प्रावधान राखिएको हो ।
एउटा विश्वविद्यालय अन्तर्गत पाँच ओटाभन्दा बढी मेडिकल कलेज रहन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । समितिले दिएको प्रतिवेदनमा यो व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार पुगेका र आशयपत्र लिइसकेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजका हकमा लागू नहुने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर फेरि चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भइसकेपछि उपत्यका बाहिर नै पनि छैटौं मेडिकल कलेज खुल्न पाउने छैन ।
प्रसाईंको मेडिकल कलेजको पूर्वाधार पुग्नुका साथै काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनका लागि आशयपत्र समेत लिइसकेको छ । तर डा. गोविन्द केसीसँग उनको १५औं अनसन तोडाउने बेलामा आशयपत्र जहाँसुकैको भए पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सम्झौता भएको थियो । यसरी सम्झौता विपरीत गएर बीएन्डसीलाई जोगाएको स्पष्ट हुन्छ । प्रसाईं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका निकट मानिन्छन् ।
भएकै मेडिकल कलेजको शिक्षा पनि गुणस्तरीय नभइरहेका बेला थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको नियमनकारी भूमिका कमजोर हुने तर्क डा. केसीले राख्दै आएका छन् । उनले निजीक्षेत्रले स्वास्थ्यलाई नाफामुखी व्यवसायका रूपमा लिएकाले नागरिकको सुलभ स्वास्थ्य सेवाको हक स्थापित गर्न सरकारी मेडिकल कलेजको स्थापनामा जोड दिँदै आएका छन् । त्यसैगरी निजीक्षेत्रलाई प्रतिबन्ध नगरी नियमन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि पहिले नियमनकारी निकाय र व्यवस्था ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।
केसी १६औं अनशनमा
सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौताविपरित ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ पारित भएको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसी पुनः अनशन बसेका छन् । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट बुधबार बिहान विधेयक पारित भएपछि केसीले इलाममा १६औं अनशन शुरू गरेका हुन् ।
केसीको १५औं अनशनका क्रममा सरकारले गत साउन १० गते उनको माग बमोजिम विधेयक तयार गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर सम्झौता विपरीत भएको भन्दै डा. केसीले सम्झौताको अक्षरशः पालना गर्दै विधेयक संशोधन गरी संसदबाट पारित गराउन माग गरेका छन् ।
पारित विधेयकमा सरकारले डा. केसीसँग गरेका मुख्य तीन सम्झौता तोडिएको डा. केसी स्रोतको भनाइ छ । यसमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, चिकित्सा शिक्षा नियमन गर्न अधिकार सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्नुपर्ने र ५ वर्षभित्र सीटीईभीटी हटाउने विषय छन् ।
कांग्रेसको अवरोधले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई छेकेन, राष्ट्रियसभाबाट पनि स्वीकृत, संशोधनका लागि ७२ घण्टा
१४ माघ २०७५, सोमबार २१:३८
राष्ट्रियसभामा चिकित्सा शिक्षा विधेयक टेबल, शून्य समय र विशेष समय हटाइयो, फेरि आधा घण्टा बैठक स्थगित
१४ माघ २०७५, सोमबार १३:१२
राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको अवरोध, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक टेबल हुन सकेन
१४ माघ २०७५, सोमबार १२:४२